Malitegharịa ekwentị PC n'enweghị nsogbu ma ọ bụrụ na distro gị adaba | Site na Linux
Malitegharịa ekwentị PC n'enweghị nsogbu ma ọ bụrụ na distro gị adaba
Ọ bụ ihe dị omimi, mana n'ime GNU / Linux anyị nwekwara mbibi PC anyị na-abịanụ ma enwere usoro dị mfe iji weghachite ya n'enweghị nsogbu ọ bụla, yabụ chefuo bọtịnụ ahụ Tọgharịa.
Anyị jidere igodo ahụ:
1 Alt + BipụtaPantall
Alt + BipụtaPantall
Anyị wee bụrụ octopus, na-edezi ihe ndị a:
Nchikota na aru oru:
Ma gịnị kpọmkwem ka nke a na-eme?
R Laghachi akara na kiiboodu.
E Ziga akara ngosi oge na usoro.
I Zipu usoro ndị na-egbu egbu.
U Wepu usoro faịlụ.
B Tinyegharịa usoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Malitegharịa ekwentị PC n'enweghị nsogbu ma ọ bụrụ na distro gị adaba
Ma ọ bụrụ na ịchọghị ịmalitegharị ya, mana gbanyụọ ya na REISUO
Kpọmkwem. Agbaghara m itinye ya, ekele maka icheta ya.
Imirikiti ederede m hụrụ na okwu banyere REISUB ha echefukwala ịza ajụjụ na REISUO, yabụ echegbula (?)
Daalụ @elav maka ọnụ ọ baara m uru nke ukwuu, mgbe ebutere m ihe mgbochi m jiri bọtịnụ "Tọgharia". I kwesiri ka itinye ya n'ọrụ, ị ga-aghọ octopus ma ọ bụ nwee onye enyemaka.
LOL. Ihe dị mma na nke ahụ bụ na ngwaike ahụ anaghị ata ahụhụ .. Ana m eche echiche ịchọta onwe m "onye enyemaka" maka nke ahụ. Ma ebe ọ bụ na PC m fọrọ nke nta ka ọ kwụgidere, n'ihi na ugbu a etinye m ya ka ọ rụọ ọrụ ndị ọzọ hahaha
Nnukwu mkpịsị aka aka nri na ALT wee jiri mkpịsị aka ndị ọzọ nke otu aka dee REISUB ma jiri aka ekpe pịa ImprPant.
Hahaha Adịghị m eme ya otu a. Enwerem aka buru ibu, aka isi aka ekpe di na Alt (aka ekpe). Mkpịsị aka nta nke aka nri na PrintScreen. Ejiri m aka ekpe na-eche maka leta RESU na aka ekpe IB hahahaha .. Octopus di ocha. Nke a na echetara m ndị jiri VIM 😛
Tozọ ị ga - esi mee ya bụ pịa Alt + PrintPantall n'otu oge, mana hapụ igodo PrintPantall ma jide naanị ALT…. na otu aka ozo nweere onwe i pinye igodo ozo di iche iche otu na otu (REISUB) rue mgbe akpochapu malitere ... 😉
Zaghachi Patricio Ibañez
Obi dị m ụtọ na e nwere ndị dị ka gị, ndị na-enyere anyị aka.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka onyinye a.
Hahaha, echetara m na m ji nke a oge gara aga, mana amaghị m ihe ngwakọta ọ bụla mere, daalụ!
Na ọnụ ya: na-ege egwu na VLC
Belata akara ngosi dị na Ngwa Ngwa na Gnome-Shell